E-Invoice - Propars E-export amin'ny Amazon, Ebay, Allegro ary Etsy
Hihaona amin'ny Generation E-Invoice vaovao!
Afindra amin'ny e-faktiora ny orinasanao, ankafizo ny fanovana nomerika.
Ahoana no hivadihana amin'ny e-Invoice?
Na inona na inona haben'ny orinasanao dia mora be ny mifamadika amin'ny E-Invoice miaraka amin'ny Propars!
Tombo-kase ara-bola avy amin'ny fitantanana ny vola miditra mandahatra azy.
Mifandraisa aminay raha vantany vao mahazo ny tombo-kasenny vola ianao. Izahay no hikarakara ny ambiny rehetra.
Manomboha mampiasa E-Invoice
Ataovy feno ny fanamboaranao ao anatin'ny ora vitsivitsy ary manomboka mamoaka e-faktiora amin'ny andro iray ihany. Tongasoa eto amin'ny tontolon'ny nomerika!
Miova amin'ny e-faktiora izao miaraka amin'ny zon'ny mpampiasa 12.000 isan-taona!
Tsy misy sarany fanampiny, toy ny activation na setup, mandritra ny fifindrana mankany amin'ny e-Invoice.
Angonina ny kaonty miditra ao amin'ny efijery Propars, ary tsy maintsy mamoaka faktiora amin'ny tsindry iray fotsiny ianao.
Tahiry maimaimpoana sy azo antoka
Ny faktiora dia voatazona maimaimpoana mandritra ny 10 taona eo ambany fiantohan'ny Propars.
Fanohanana an-tserasera maimaim-poana amin'ny faharetan'ny fampiasanao Propars.
* I Propars dia manana fahazoan-dàlana mpampiditra tsy miankina ankatoavin'ny Minisiteran'ny Vola.
Tombony amin'ny e-faktiora
E-Invoice dia teraka ary miaina amin'ny tontolo nomerika. Tsy atahorana ho very na simba.
haingana sy mora
Haingana sy mora lavitra noho ny faktiora taratasy.
E-Invoice dia mamonjy hazo an'arivony maro tsy hojinjaina isan-taona.
Tsotra mba hifehezana
Tsotra kokoa ho anao ny manamarina sy manara-maso ireo faktioranao.
Mora lavitra noho ny faktiora taratasy.
Ankafizo ny tontolon'ny nomerika.
Mamonjy anao ny olana amin'ny fitahirizanao ny faktioranao.
Izy io dia mandeha ho azy ny fizotran'ny tatitra momba ny faktiora ary mamonjy fotoana.
Rehefa niantsena avy amina orinasa lehibe aho, dia tonga taty amiko ho toy ny e-faktiora ny faktiora. "Ahoana koa ny fandalovantsika?" Raha hoy aho hoe: "Orinasa lehibe ihany no afaka mandalo, tena lafo io asa io", hoy izy ireo. Nianarantsika tamin'ny Propars fa tsy toy izany.
Vidiny amin'ny sarany mialoha
Raha lazainao fa somary be loatra ny volako, dia mety kokoa aminao ireto fonosana ireto.
Na aiza na aiza no ampiasaina
Andao hiantso anao